Inona no azon'ny alika tsy mahomby voa | Tontolo alika
Ny alika dia volom-borona izay manome antsika fitiavana sy orinasa betsaka ho takalon'ny fikarakarana kely. Amin'ny maha mpikarakara azy antsika dia tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny fahasalamany isika ary mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby isaky ny ilaina izany, toy ny rehefa manomboka manana olana amin'ny fanalefahana ny tenany izy.
Ho fanampin'ny fanarahana ny fitsaboana izay natoronao dia tsy maintsy manontany tena koa izahay inona no azon'ny alika tsy mahomby voa?, satria raha manome azy karazan-tsakafo tsy mety indrindra isika dia mety hiharatsy ny aretiny.
Ny tsy fahombiazan'ny voa dia aretina iray miantra amin'ny voa. Ny alika salama dia afaka mamoaka ireo poizina mivezivezy ao anaty ra amin'ny alàlan'ireny taova tena ilaina ireny, saingy rehefa misy olana dia mila rano bebe kokoa ianao mba hahafahanao mamoaka poizina mitovy habe aminy. Amin'ny tranga tena matotra, ny hydration mihombo dia tsy mahavaha ny olana ary miakatra ao anaty ra ireo poizina ireo.
Raha te hahalala raha mijaly amin'izany ny namantsika dia tokony ho fantatsika ireo soritr'aretina asehony. Ny tsy fahombiazan'ny voa dia mety ho maranitra na maharitra. Na manana ny iray na ny iray hafa ianao mila fanampiana ara-biby ianao, satria na dia azo averina aza ny voalohany, ny voa dia tena ilaina tokoa ny taova.
Ny famantarana matetika indrindra dia:
Tsy fahombiazan'ny voa mahery vaika: fahalainana, mandoa, fikorontanana, tsy fahazotoan-komana, fahosana ara-batana.
Ny tsy fahampian'ny voa: fahalemena, fihazonana tsiranoka, halitose (fofona ratsy), fandoavana, fivalanana, fery amin'ny vava, tsy fahampian-drano, fihetsika mihohoka.
Raha mieritreritra izahay fa manana an'io ianao dia tokony hikarakara fitsaboana veterinera, ary omeo sakafo ambany sôdiôma sy posipôra izy, be proteinina. Noho io antony io dia tena ilaina ny manome azy ireo sakafo tsy misy serealy, izay manana hena ho loharanon'ny proteinina tokana. Mba hanamorana ny fiasan'ny voa, dia asaina omena sakafo mando izy satria misy hamandoana 70%.
Amin'izany fomba izany, ny alika malalantsika dia afaka manohy manana fiainana ara-dalàna tanteraka 🙂.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Inona no azon'ny alika tsy mahomby voa?
Mampianatra ny alikakely hankany amin'ny trano fidiovana
Karazany: Ca Rater Mallorquí